INkosana encinci, inoveli engunaphakade ekungekho mntu unokulibala ukuyifunda | Uncwadi lwangoku
UDiana Millan | | Iincwadi, Iincwadi zoLutsha
"INkosana encinci" yenye yeencwadi ekufuneka wonke umntu azifunde. Kwakhona, le yincwadi ekufanele ukuba uyifunde ubuncinci kabini, kube kanye njengabantwana kwaye kube kanye njengabantu abadala. Iinkxalabo zalo mlinganiswa uthandekayo zenza ukuba le noveli imfutshane ifundwe egcwele iimvakalelo, ukutsala iimvakalelo apho sasingacingi ukuba sinazo.
Singathetha ngobuchwephesha. Njengoko ingoyena udumileyo kwiinoveli ezibhalwe nguAntoine de Saint-Exupéry, eyabhalwa ngexesha lokuthinjwa kombhali e-United States, eyapapashwa okokuqala ngo-1946 nguReynal & Hitchcock. Kodwa le ncwadi ayifanelanga ukuba kuthethwe ngayo ngoluhlobo. Ifanelwe ukuphathwa ngothando.
INkosana encinci ngumntwana ovela kwi-asteroid B 6212 ethi, ukusuka kwiplanethi ukuya kwiplanethi, idibane nabalinganiswa abaphambili de ifike emhlabeni. Embindini weSahara Desert, inkwenkwana idibana ne-aviator elahlekileyo into egqitha koko sikwaziyo ukuba ubuhlobo buya kubamanya.
Engqondweni yomntwana, isengumbali oxela ibali leziganeko zomnye umntwana. Yonke into inobugqi kwaye iyathandwa. Kodwa xa sikhula kwaye sibe "ngabantu abanzulu" bethetha "ngezinto ezinzulu," ayonzakalisi uthuli loo ncwadi, sayilibala kwiminyaka eyadlulayo, kwaye jonga kuyo. Kwaye kubonakala kuyinto engakholelekiyo ukuba incwadi encinci kangaka, enemizobo kwaye kulula ukuyifunda, inokuwutshintsha umbono wethu wobomi kwisiqingatha seyure.
Ayisiyo enye yeencwadi ezithengisa kakhulu ngalo lonke ixesha kuba. Kwaye ayifundwanga ngokubanzi eFrance kuphela ngenxa yokuba umbhali wayo yayingumFrentshi. Isizathu sokuba "iNkosana encinci" ibe kwaye iya kuba umthengisi ogqibelele kude kube ngunaphakade ngolu hlobo lulandelayo: Yindlela yobuhlobo, uthando, intlonipho kunye novakalelo loxanduva.
Ibali lenkwenkwe engazange iwunike umbuzo esele iwubuzile kodwa, nangona kunjalo, engaze inike mpendulo. Umntwana owayeyithanda intyatyambo yakhe ngaphezu kwayo nayiphi na enye, kuba yayiyeyakhe, kuba wayeyinkcenkceshela, wayikhusela emoyeni, wayithanda nangona wayethanda. Umntwana ongayiqondiyo inkxalabo yabantu abadala kuba eswele imigaqo esisiseko.
Ke xa uziva ungekho endaweni, xa yonke into ikukhathaza, xa ubomi buba yinkxalabo engapheliyo, thatha incwadi kwaye ukhuphe umsindo kunye nosizi oluthwele ngaphakathi.
Le ayisiyoncwadi ebalaseleyo onokuyinika wena, kodwa ikwasisona sipho sigqibeleleyo oya kuzinika sona.
Ukuba awunayo incwadi, ungaphoswa zezinye amabinzana enkosana encinci eyona nto imangalisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Iincwadi zoLutsha » INkosana encinci, inoveli engunaphakade ekungekho mntu unokulibala ukuyifunda
Incwadana engayi kuze ndiyilibale ngenxa yeemfundiso ezikhokelela ekungeniseni iimvakalelo ezabelwe enye.
Okuncinci okwaziwayo kwihlabathi loNcwadi